बाइबल भन्छ कि स्वर्गमा लगिएको येशू परमेश्
बाइबल भन्छ कि स्वर्गमा लगिएको येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ!
भजन: 47: -10-१०
परमेश्वर आनन्दित हुनुभयो,
हे परमप्रभु , तुरहीको आवाज अन्तर्गत। परमेश्वरको
प्रशंसा , प्रशंसा! हाम्रो राजाको प्रशंसा गर्नुहोस्, प्रशंसा! किनकि सारा पृथ्वीका परमेश्वर राजा हुनुहुन्छ, उहाँको स्तुति गाएर प्रशंसा गर्नुहोस्। परमेश्वर अन्यजातिहरूका राजा हुनुहुन्छ,
परमेश्वर आफ्नो पवित्र विश्वासमा विराजमान हुनुहुन्छ।
सबै भन्दा अघि अब्राहाम परमेश्वरको मान्छेको रूपमा भेला भएका छन्
किनभने पृथ्वीका ढालहरू परमेश्वरकै हुन् , उहाँ उच्च हुनुहुन्छ।
बाइबल भन्छ जो कोही स्वर्गमा लगियो उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले अब साल्स्टरमा जे पढ्छौं, त्यो येशूको उदासीनताको भविष्यवाणी हो। यसले भन्छ कि परमेश्वर आनन्दित हुनुभयो।
यो वर्णन गरिएको छ कि ख्रीष्टको स्वर्गारोहण हो। यो स्वर्गमा लगिएको थियो जब येशू वर्णन गरिएको छ। र यो पुरानो नियममा लेखिएको छ।
प्रभु र भगवान
येशूको आनन्दको समयमा जो कोही उठेका छन्। छ पटक भन्दा कम उसलाई भगवान भनेर चिनिन्छ।
एकचोटि उसलाई यहोवा भनेर चिनिन्छ। प्रभुको पदमा यो YHWH भन्छन्। यो भगवानको नाम हो। बाइबलले येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर स्पष्टसँग बताएको छ।
येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ
येशूको स्वर्गारोहणले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्दछ।
Vecka 23, lördag 12 juni 2021 kl. 22:34